स्थलगत रिपोर्ट : भोलेबाबाको ताकमा युवतीहरू| Nepal Pati
नेकपा स्थायी समितिको बैठक भोलीसम्मका लागि स्थगित
सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा कानुनको उलंघन गरेकाे भन्दै आलोचना
७८ जना कमलरीकाे अझै उद्दार हुन सकेन
नेकपाको बैठक जारी : पूर्व माओवादी रमिते पूर्व एमाले घम्साघम्सीमा
संसद्को हिउँदे अधिवेशन ११ पुसबाट
नेकपाको बैठक : कोही ओलीको बचाऊमा कोही आलोचनामा
‘एक जना महिला बिरामी भएर भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरीको घरमा आइन्। राधाजस्तै खचाखच मान्छे भरिएको आँगनमा उनलाई राखेर भोलेबाबा उर्फ रामबहादुरले। त्यसपछि झारफुक सुरु भयो, उनकी ‘पार्वती’ अथवा सुखड गाउँकी स्मारिका चौधरीबाट। तिम्रो बिहेमा मैले पेन्टी उपहार दिएकी थिएँ, तिमीलाई थाहा छ कि छैन ? हेर त तिम्रो पेन्टी फोहोर भएको छ-स्मारिकाले झारफुक गरेझैं गरेर भनिन्। ती महिलाले लजाउँदै खचाखच मान्छेबीच सलवार खोलिन् र पेन्टी देखाइन्। त्यहाँ भएका सबैले ताली पिटे’, राधामाथि कुटपिट हुनुभन्दा केही दिन अघिको एउटा घटना सुनाउँदै स्थानीय युवती रेनुका बोहराले भनिन्।
भोलेबाबा उर्फ रामबहादुर, किस्मती र स्मारिकाविरुद्ध राधा र अर्की एक महिलाले (नाम गोप्य राख्ने सर्तमा) बोक्सी आरोपमा अमानवीय यातना दिएको उजुरी हालेका छन्। प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। नयाँपत्रिकाबाट
निर्मलाकी आमाले उजुरी दिएका ८ प्रहरी को-को हुन ?
निर्मला पन्त हत्याका प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै उनकी ...
स्वकीय सचिवको तलब आफैँ लिन्छन् सभामुख देखि सांसदसम्मले
काठमाडौं । संघीय संसदका पदाधिकारी र सांसदले आफ्ना...
तातोपानी नाका खुलाउन पूर्ण तयारीमा
काठमाडौं । मितेरी पुलको संरचना पुनर्निर्माण सुरु भ...
आयल निगमलाई उपभोक्ताभन्दा नाफा प्यारो !
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा म...
नेकपा बैठक बस्दै, ओली माथि आक्रोस
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचन...
आफु बाघ भएको भन्दै वामदेवमाथि ओलीको ब्यङ्ग्य
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार असाधारण सफलताको विन्दुमा रहेको दावी गर...